Ihe ngema Aka nke Inwe Silos na Otu esi emebi ha | Martech Zone
Teradata, na mmekorita ya na Forbes Insights, weputara a nyocha ohuru nke ahụ na-achọpụta ịchọpụta ihe ịma aka na ihe ngwọta maka ịkwatu silos ahịa. Ihe nchoputa a gunyere ndi oru CMO ise ndi B2B na B2C nke udiri ha ikwuputa uzo ha di iche iche, uche ha, nsogbu ha na azịza ha.
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-atụle ihe ịma aka nke ahịa silos, gụnyere nke ọ bụla nwere ọhụụ nke aka ya, ahụmịhe ndị ahịa na-enweghị atụ, ozi ezighi ezi, ịkwalite ire ere dị mkpụmkpụ maka usoro atụmatụ ogologo oge, ndị otu ejikọtaghị ọnụ na ndị na-adịghị arụkọ ọrụ ọnụ, na enweghị oke oke uto. mpaghara dị ka dijitalụ dị ka otu silo na-asọmpi ọzọ.
Kụda ahịa ahịa na-achọ:
Dochie asọmpi na iche n'etiti silos na nkwukọrịta na imekọ ihe ọnụ.
Kwado usoro ịre ahịa nkwado mgbe ọ dị mkpa. Na nyocha nke Teradata, ndị na-ere ahịa na-ekwu n'ụzọ kachasị mma maka ịzụ ahịa iji jikọta ya na ọrụ ndị ọzọ bụ ịtọlite ​​usoro agwakọta.
Ndi ndu kwesiri ime dika ndi nnochita anya, iguzobe ihe ndi ozo, igba ume site na ndi otu na ndi ihe omuma, na ime ka ndi mmadu mara ahia.
Ndị na-ere ahịa na-eche echiche dịka ndị ndụmọdụ, na -emepụta nghọta nke ụlọ ọrụ, na-azụ ahịa ahịa ahịa ma na-ekere òkè na mmepe atụmatụ.
Tonweta ndị isi. Teradata chọpụtara na ndị na-ere ahịa nwere ibu ọrụ ndị isi ji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa ka ndị ọzọ kwenyere na ọ dịghị ihe mgbochi ọ bụla maka ijikọ ọnụ ọnụ.
Karịsịa - kwado ihe mgbaru ọsọ nke atụmatụ ahịa na mkpa nke ndị ahịa na ndị ahịa na-ahụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Enwere otutu nghọta na ntuziaka na akụkọ ahụ, yabụ kpachara anya budata ma mee ihe na akwụkwọ akụkọ a dị mkpa.
Tags: CitrixNa-ekwu okwuimekọ ihe ọnụForbesokpokoroNetiper Networksahịa silosndi otu ahiasilosteradataWi-Fi Alliance